श्रीमान विदेशमा यता श्रीमतीको अवैद्य सम्बन्धले पुर्यायो नर्कमा – Online Nepal
श्रीमान विदेशमा यता श्रीमतीको अवैद्य सम्बन्धले पुर्यायो नर्कमा
May 7, 2020 1283
गुल्मी । बुटवलमा अर्को दुखलाग्दो घटना भएको छ । गुल्मीको मलायगिरी गाउँकी २२ वर्षीया गीता खड्का बुटवल बस्दै आएकी थिइन् । मलेसियामा रहेका श्रीमान् ईश्वर खड्काले उनलाई ५ वर्षीय छोरासहित बुटवलस्थित शहरमा लगेर डेरा गरेर राखेका थिए । सोमबार साँझ मात्रै श्रीमान्सँग फोनमा कुरा भएको थियो केहिबेर । त्यसपछि दिदीको फोन आएको छ भनेर गीताले काटिन् । त्यसै दिन साँझ छोरासँगै लिएर कोठा बाहिर निस्किइन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्वर १९ को पत्थरगञ्जमा उनको डेरा थियो । घरबेटी दीपक सेन भन्छन् –‘साँझ त्यस्तै साढे सात बजे उनी डेराबाट बहिर निस्केकी हुन् ।’ सेनको घरमा गीताका आमा छोरा डेरा सरेको त्यस्तै छ सात महिना जति भएको थियो । मंगलबार विहान करिव सात बजेतिर उनको दिदीको घर नजिकै पर्ने रुखमा गीता अर्को एक पुरुष एउटै रुखमा मृत अवस्थामा फेला पर्छिन् ।
बुटवल मै डेरा गरि बस्ने मृतक गीताकी दिदी लक्ष्मी कुँवर क्षेत्री भन्छिन् –‘हिजो बिहान त्यस्तै चार बजेरित मेरो कोठा भित्र छोरालाई जबरजस्ती धकेलेर अहिले आउँछु भन्दै हिँडेकी हो । विहान सात बजेतिर एउटी महिला र पुरुष एउटै रुखमा मृत अवस्थामा रहेको खबर आएपछि हेर्न जाँदा मेरै बहिनी र फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने केटा रैछ ।’ लक्ष्मी भन्छिन्, ‘रातभरी उनीहरु फ्याक्ट्री पछाडीसंगै बसेका रहेछन् । त्यहीँबाट आएर छोरा मेरो कोठामा छाडेर हिडेपछि एकैसाथ जीवन त्याग गरेका रहेछन् ।’
मंगलबार उनीसंगै जीवन त्याग गर्ने उदयपुरका २४ वर्षीय हीराबहादुर श्रेष्ठ हुन् । मंगलबार ईलाका प्रहरी कार्यालयमा आइ उनका दाजु रणबहादुर श्रेष्ठले भाईको लाश बुझेर लगेका छन् । बुटवल ईलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिएसपी भिम भट्टराईले दुईबीच अवैद्यसम्वन्ध रहँदै आएको खुलेको बताए । ‘हामीले थप अनुसन्धान गर्दैछौ,’ उनले भने । हीराबहादुर श्रेष्ठका दाईका अनुसार भाईले त्यस फ्याक्ट्रीमा काम गर्न लागेको डेढ वर्ष जति भयो । घरमा श्रीमती र ९ महिनाको छोरा छ । ‘छ सात महिनाअघि मात्र घरमा गएको थियो । श्रीमतीसँग पनि सम्वन्ध राम्रै थियो । यता अर्को महिलासँग जीवन त्याग गरेको खबर आए पछि बुटवल आएका हौंँ । अहिले भाईको लाश लिएर जाँदैछौं,’ उनले भने । उनकी श्रीमति र सन्तानको बिचल्ली हुने भएको उनले पीडा सुनाए ।
उनका अनुसार उनीहरुको पुखेयौंली घर उदयपुरको चौदण्डी नगरपालिका भए पनि हाल बसाई सराई गरेर उनीहरु सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका वडा नम्वर ५ मा बस्दछन् । यता, मृतक गीताका ५ वर्षीय छोरा ठूली आमाको शरणमा छनन् । गीताको लाश बुझ्न उनका ६५ बर्षीय ससुरा रेशमबहादुर खड्का उनका भाई गणेश खड्का लगायत गुल्मीबाट बुटवल पुगेका थिए । मंगलबार बुहारीको लाश बुझेर खड्का परिवारले तिनहुँखोलामा अन्तिमसंस्कार गरेका छन ।
मलेशियामा रहेका मृतक गीताका श्रीमान किशोरले ईमोबाट कुरा गर्दै गहभरी आँशु पारे । ‘के गर्ने ३ महिनादेखि लकडाउनका कारण कोठा बाहिर निस्कीन सकेको छैन् । साथमा पैसा पनि छैन । लकडाउनअघि चैत्र महिनामा यहाँको खर्च कटाएर ३५ हजार रुपैयाँ श्रीमतिलाई पठाएको थिए,’ उनले भने ।
‘लकडाउन सुरु नहुँदै मेरो घर आउने फलाइट थियो । तर, श्रीमतिले अहिले नआउनुहोस अझै एक वर्ष थपेर उतै बस्नुस भनेकी थिइन्,’ उनले भने, ‘मैले पटक पटक पठाएको दश एघार लाखको हिसाब किताबको टुंगो छैन । कहिले कसलाई कहिले कसलाई दिएको छु भन्थिन् । तर उनीहरुलाई सोध्दा लगिसकेको बताउँछन् ।’ ‘अब मसंग पैसा पनि छैन श्रीमति पनि छैन,’ उनले दुखेसो पोखे ।
Prevभारतबाट १७ लाख ९० हजार रुपौयँ बोकेर नेपाल छिरेका दुई जनालाई सशस्त्रले पक्रिएपछि यस्तो खुल्यो
Nextविश्व चकित हुने खबर : किम र उनकी बहिनी नै नक्कली बनाएर सार्वजनिक गरिएको खुलासा
सवोच्चको निर्णय आफ्नो पक्षमा होस् भनेर ओलीले दिए प्रधानन्यायाधीशलाई साढे तेह्र करोड
गोर्खाली सैनिकले मुख खोले भारतमा तरंग,नेपालीको रगत उम्लियो (भिडियो हेर्नुहोस्)
चिनियां सेनासंग भएको झड्पमा २० भारतिय सैनिकको मृ*त्यु
नेपालमा घ’टेका यी तीन घ’टनाः जसले आफ्नै परिवारको ह’त्या ग’रेर आ’त्म’ह’त्या ग’रे
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (61884)
आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं… (50965)
सुष्माभन्दा खतरा उनकी भाउजु, खुल्यो नन्द भाउजुको सबै पोल! यसरी लकाए सत्य (हेर्नुहोस भिडियो) (45307)
काठमाडौंमा डेरा गरेर बस्नेहरुको लागी आयो यस्तो खबर ! (44756)
जेठ ३ गते शनिबारदेखि यस्ता कडा नियमहरु लागु हुने, लकडाउनमा यस्तो कसैले नसोचेको नियम आयो हेर्नुहोस (43316)
वैशाख ३ गतेपछि यस्तो छ आवतजावतको तयारी , ३ गते सम्म धैर्य गरौ (41262)
तल्लो पेट दुखेर अस्पताल पुगेकाको जाँच गर्दा डाक्टर नै च*कित हुने देखियो विश्वकै दुर्लभ घ*टना (37957)
नवराज-शुष्मा प्रकरण : नवराजकी प्रेमीका शुष्माले पहिलोपटक मुख खोलीन् (36184)
लकडाउनकै बीच भर्खरै यस्तो घोषणा, जनताको जीवनका लागि यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई (भिडियो सहित्) (29157)
यसरी बस्यो १६ बर्षे बालिकाको पेटमा बच्चा , अन्तत: आफैले भनिन् कस्ले गर्यो यस्तो (भिडियो सहित) (27805)
माघमा दुई ठूला दूर्लभ खगोलीय घटना हुँदै, राजनीतिमा व्यापक परिवर्तन हुने संकेत,सचेत रहन आग्रह । (हेर्नुहोस भिडियो)